पर्वतको महाशिलामा कृषकहरुलाई यन्त्रिक हलो वितरण ,किसानहरु हर्षित ! – ebaglung.com
पर्वतको महाशिलामा कृषकहरुलाई यन्त्रिक हलो वितरण ,किसानहरु हर्षित !
२०७५ असार १५, शुक्रबार १२:१६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
निर्मल पौडेल, पर्वत पर्वत २०७५ असार १५ । कृषिमा आधुनिकिकरण गर्ने र कृषकलाई व्यावसायिक बनाउँदै वेरोजगार युवाहरुलाई गाउँमै रोजगार दिने मुख्य योजना लिएको पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले कृषकहरुलाई मिनी पावर टेलर यान्त्रिक हलो वितरण गरेको छ ।
गाउँपालिकाका ६ वटै वडाका कृषक समुहलाई उनिहरुको माग अनुसार रु ५४ हजार पर्ने यान्त्रिक हलो ६० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको हो ।
हलो वितरण गदै गाउँपालिका प्रवक्ता जीवन विक्रम उच्चैले भने थोरै समयमा धेरै खेतबारी जोत्न सकिन्छ, गोरु पाल्न पनि पर्दैन थोरै लागतमा धेरै खेती गर्न सकिन्छ यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै कृषकहरुलाई राहत होस भन्ने हेतुले हलो वितरण गरेका हौँ । उचैका अनुसार
पहिलो चरणमा एउटा समूहलाई एउटा यान्त्रिक हलो वितरण गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मागअनुसार यान्त्रिक हलो वितरण गरिने पालिकाले योजना वनाएको छ ।
यसभन्दा अगाडि पर्वतका जलजला, मोदी कुश्मा, फलेवास, विहादी र पैँयुले समेत कृषकलाई यान्त्रिक हलो वितरण गरिसकेका छन् । यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले करीब ३०० वटा यान्त्रिक हलो वितरण गरेको थियो । अनुदानमा हलो प्राप्त गर्दा किसानहरु हर्षित भएका छन् । डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने तथा कम जनशक्ति भए पनि पुग्ने भएकाले यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यलय पर्वतका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले बताउनुभयो । मिनिटिलरको वितरणले जिल्लामा धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । मिनिटिलरको प्रयोग संगै गोरुहरुको लोप हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहने देखिन्छ ।
कालीगण्डकी किनारमा टाउको नभएको महिलाको शव भेटियो !
सुकाएको लुगा उठाउन जाँदा करेण्ट लागेर बिहुँकी महिलाको तीन औँला जले !